အစားအစာတစ်မျိုးတည်းကိုပဲ နေ့တိုင်းစားဖြစ်နေပြီလား - YOYARLAY Digital Media and News
Published: September 23, 20195:11 pm
မနက်ခင်းတိုင်း မနက်စာအနေနဲ့ ကြက်ဥပဲစားဖြစ်နေလား။ (ဒါမှမဟုတ်) အစားအစာတစ်မျိုးတည်းကိုပဲ စားဖြစ်နေလား။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ အစားစားတဲ့အလေ့အကျင့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောင်းလဲမှု တချို့လုပ်ဖို့တော့လိုလာပြီနော်။ နေ့တိုင်းအစားအစာတစ်မျိုးတည်းကို စားတာက သင့်အတွက် ကျန်းမာရေးမညီညွှတ်နိုင်ပါဘူး။ ဘာလို့ အဲဒီလိုပြောရလဲဆိုရင် အကြောင်းအရင်းတွေရှိပါတယ်နော်..။
ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်က တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် အာဟာရဓာတ်အမျိုးမျိုးကို လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက် အစားအစာမျိုးစုံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် အစုံတွေကို စားပေးရပါတယ်။ အသီးတစ်မျိုးတည်း၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တစ်မျိုးတည်းကို စားသုံးပေးမယ်ဆိုရင် အာဟာရချို့တဲ့တာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွှတ်အောင်၊ အာဟာရဓာတ်မျှတအောင် အစားအစားနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို မျိုးစုံစားပေးသင့်ပါတယ်။
အစားမရွေးဘဲ အစုံစားပေးတာက သင့်အစာအိမ်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါက ကိုယ်ခံအားစနစ်အားကောင်းအောင် ကူညီပေးနိုင်သလို အစာခြေစနစ်အားကောင်းလည်း ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ သင့်အစာအိမ်ကျန်းမာရေးအတွက် အစားအစာကို ညီညွှတ်မျှတစွာစားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန်ကျချင်တဲ့သူတွေအတွက် အစားအစာတမျိုးတည်း နေ့တိုင်းစားတာက ကိုယ်အလေးချိန်ကျတဲ့နှုန်းကို နှေးသွားစေနိုင်ပါတယ်။ အသီးမျိုးစုံနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အစုံကို စားပေးတဲ့ လူတွေက ကိုယ်အလေးချိန်ကျအောင် စွမ်းဆောင်တဲ့နေရာမှာ အခြားသူတွေနဲ့ယှဉ်ရင် ပိုမြန်တယ်လို့ လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။
အစားအစာတစ်မျိုးတည်းကိုသာ ခဏခဏစားသုံးတာက အာဟာရဓာတ်တစ်မျိုးတည်းသာလွန်ကဲနေနိုင်ပြီး ကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုရင် နနွင်းအများကြီးစားသုံးမိသလိုပဲ အသည်းလုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးဆိုးကျိုးရှိလာနိုင်ပါတယ်။
အစားအစာတစ်မျိုးတည်း နေ့စဉ်ရက်ဆက်စားနေမယ်ဆိုရင် အစားအစာချင်စိတ်မရှိဘဲ အစားရွေးတာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုအခြေအနေမှာဆိုရင် လူတစ်ယောက်က ဒီအစားအစာက ဘယ်လိုအရောင်ကြီး၊ အရသာက ဘယ်လိုကြီး၊ အနံ့က ဘယ်လိုဖြစ်တယ်တွေ ပြောပြီး အစားချေးများလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
Ref:5reasons why you should not eat the same food every day
Previous Previous post: အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ တောမီးကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည့် မီးခိုးမြူများ ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းထိ ရောက်ရှိ
Next Next post: သင့်အနာဂတ် အတွက် စတင် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမည် ဆိုလျှင်
Published: December 15, 20173:53 am Updated: May 9, 20194:30 pm
ဝပေမယ့် လှအောင် ဓာတ်ပုံ ဘယ်လိုရိုက်မလဲ?
ဝနေလို့ ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်ပေမဲ့ မလှမှာစိုးလို့ မရိုက်ဖြစ်တာကြာနေပြီလား? ဝပေမယ့် လှနေတဲ့ မမဝဝလှလှတွေအတွက် ဓါတ်ပုံရိုက်ရင် ကျစ်လျစ် သွယ်လျလှပပြီး ချစ်စရာပုံလေးတွေရအောင် ကိုယ်နေဟန်ထား ဘယ်လိုထားရမယ် ဘယ်အနေအထားနဲ့ ရိုက်ရမလဲ ဆိုတာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ကင်မရာရှေ့မှာ တည့်တည့်ရပ်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းဟာ…
Published: March 20, 201810:30 am Updated: February 20, 202010:25 am
စာဖတ်သူတို့အနေနဲ့ စာအုပ်တွေ၊ ပြဇာတ်တွေနဲ့ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ သေသပ်ခမ်းနားတဲ့ဗိသုကာလက်ရာတွေနဲ့ထုံမွှမ်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ ရဲတိုက်ကြီးတွေကို မြင်ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီခေတ်ဟောင်းအဆောက်အဦကြီးတွေထဲကိုရောက်သွားခဲ့သူတစ်ဦးအနေနဲ့ကတော့ ဆွတ်ပျံ့ကြည်နူးဖွယ်၊ အံ့သြမင်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အတိတ်ရဲ့အငွေ့အသက်ကို ခံစားမိမှာအမှန်ပါပဲ။ “ရဲတိုက်တွေဟာ နန်းတော်တွေ၊ ခံတပ်တွေနဲ့မတူဘဲ ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်” လို့ စာရေးဆရာ Marc Morris က…
Published: August 22, 20192:05 pm Updated: 2:07 pm